सुन्दरी छोरीसँग विवाह गर्नेलाई दुई करोड दिने बाबुको घोषणा ! – Khabaarpati
December 27, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on सुन्दरी छोरीसँग विवाह गर्नेलाई दुई करोड दिने बाबुको घोषणा !
काठमाडौं । थाइल्याण्डका एक करोडपतिले आफ्नी कुमारी छोरीसँग विवाह गर्ने केटालाई दुई करोड भन्दाबढी रकम दिने घोषणा गरेका छन्।थाइल्याण्डको दक्षिणी प्रान्त चुन्फोन प्रदेशका करोडपति अर्नोन राेडथोंगले छोरी कार्नसितासँग विवहा गर्नेलाई उक्त रकम दिने घोषणा गरेका हुन्। कार्नसिता २६ वर्षकी छन्। उनले ब्याच्लर पढेकी छन् भने चिनियाँ र अंग्रेजी भाषा बोल्न सक्छिन्। ५८ वर्षका अर्नोन फलहरूको फार्मका मालिक हुन्।
विवाहका लागि राष्ट्रियताको सीमा जरुरी नभएको उनले बताएका छन्। छोराहरू भएपनि विवाहपछि सबै सम्पत्ति ज्वाँइलाई दिने उनले बताएका छन्। साथै व्यापार पनि सम्हालनु पर्ने छ। मिररको रिर्पोट अनुसार उनी छोरीको विवाह नभएका कारण तनाबमा छन् र यस्तो फैसला गरेका हुन्।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,